Umhla oyimfama: indlela yokuziphatha? - izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga
Umhla ongaboniyo, ewe, ayilo themba lokugqibela kwabo baphoxekileyo kwaye banxanelwe ubudlelwane. Okokuqala, ngentlanganiso enjalo, unokumazi umfazi / indoda yamaphupha akho ebomini bokwenyani.
Iingcali zengqondo zifundisisa indlela yokuziphatha kwabantu abatshatileyo iminyaka eliqela, kunye nohlobo lobudlelwane babo. Iziphumo zomsebenzi wabo zinokumothusa umntu. Xa kwenziwa uphando malunga nendlela yabazana, uninzi lwabo luphendule ukuba badibana kubahlobo babo.
Ndimele nditsho imihla engaboniyo ayinakusoloko ikhokelela kwisiphelo esisengqiqweni, oko kukuthi, umtshato owonwabisayo. Olu inokuba luvavanyo lokwenyani oluya kuthi ngokuthe ngcembe luye ngokuthe ngcembe luye kwintlekele yokwenene.
Uyithintela njani le nto ukuba ingenzeki? Masizame ukuwuqonda lo mbandela.
Kuyimfuneko ukulawula imeko
Akufuneki ulandele rhoqo ukukhokela kwabanye abantu kwaye uhambe ngokuchasene nentando yakho. Ukuba uziva ukuba ufuna ukwala, yenze. Indoda ayinyanzelekanga ukuba idibane nentombi yomhlobo olungileyo kanina ukuze ingakhubekisi lo mva.
Kuya kufuneka uthathe inxaxheba ebonakalayo ekucwangciseni iintlanganiso.
Sukuvumela omnye umntu ukuba abeke indawo kunye nexesha lomhla endaweni yakho, kwaye ngaphandle kwemvume yakho. Zonke izinto ezingaziwayo kufuneka zikhutshwe ngaphandle komhla, ngaphandle komfazi ongaqondakaliyo.
Indawo yentlanganiso ikhethwe apho bobabini banokuziva bekhululekile.
Khetha indawo efanelekileyo yeentlanganiso
Umboniso bhanyabhanya, ikonsathi yelitye, apho ingxola kakhulu, isenokungabi yeyona ndawo iphumeleleyo kwintlanganiso yokuqala. Kukulungele ukuhlala kwindawo yokutyela okanye ikhefi, apho unokutya khona kwaye umamele umculo omnandi, oku kuya kuba sisimo sothando ngakumbi.
Ngomhla wokuqala, bahlala befuna nje ukwazana, babe nexesha elimnandi kwaye benze uluvo malunga nabanye.
Nokuba kwenzeka ntoni kwintlanganiso yokuqala, sukuyikhupha ixesha elide, ubuncinci ngaphezulu kweeyure ezimbini. Ngokwesiqhelo umhla ongaboniyo wenzeka kwindawo yokutyela, kuba isidlo sangokuhlwa sisiqalo, isiphelo kunye nokuphela kwentlanganiso, ngokomgaqo, ikhosi yendalo yeziganeko.
Xa umlungiseleli engenisa ibhilikhwe, luphawu lokuba umhla kufuneka ugqityiwe. Ukuba yonke into iyasebenza kwintlanganiso yokuqala, ungenza umhla olandelayo.
Akubikho mntu wesithathu ngomhla ongaboniyo
Ukuba umhla wenzeka phambi komntu owazise abantu abancinci, ngokuqinisekileyo baya kuziva behlazekile kwaye behlazekile yile meko.
Ukuba umhlobo uzama kakhulu, imeko inokuba mandundu. Kungcono uxoxe naye kwangaphambili ukwenzela ukuba kwimizuzu elishumi ashiye isibini sodwa.
Thetha ngomhlobo wakho okwazisileyo
Umxholo obalaseleyo wencoko kukubonana, oku kuya kunceda ukuba bajongane ngaphandle kokuphazamiseka okungafanelekanga.
Akufanele uthethe ngokuhleba malunga nabantu oqhelene nabo, kuba iincoko ezinjalo ngokuqinisekileyo ziya kubuya njenge-boomerang, kwaye, ubukhulu becala, kwifomu egqwethekileyo. Kwaye ayinguye wonke umntu ongathanda ukumamela ukuhleba.
Kuya kufuneka ube uonwabile ngomhla.
Imihla emininzi engaboniyo ngempazamo kucingelwa ukuba ngumsebenzi wabantu abaphelelwe lithemba. Kuya kufuneka ungene kwi-interlocutor kwisimo esihle, umphathe ngomdla, ukuze uchithe ubusuku obumnandi nobuluncedo.
Ndingamanga njani intombazana okokuqala?
Iingcebiso malunga nendlela yokwazi ukuba uyamthanda umfana okanye awuthandi
Ukuthandana-Iingcebiso ezilula zaMadoda
Ziziphi iimveliso ezifanele zilahlwe ngaphambi komhla osondeleyo
exhonyiweyo ukuthandana, uthando, ubudlelwane
Edlulileyo Ndingasela ibhiya kwisuna?
Okulandelayo Inkukhu ehovini ngeetapile kunye nama-mushroom
Imibuzo ye-84 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,706.